Waa La Joogaa Wakhtigii Uu Blatter Kursiga FIFA Banayn Lahaa – Gudoomiyaha Xidhiidhka Kubada Cagta Holland
HomeWararka MaantaWaa La Joogaa Wakhtigii Uu Blatter Kursiga FIFA Banayn Lahaa – Gudoomiyaha Xidhiidhka Kubada Cagta Holland
Gudoomiyaha xidhiidhka kubada cagta wadanka Holland, Michael van Praag ayaa ka dhawaajiyey in la gaadhay xiligii uu jagada madaxweynenimo ee FIFA banyan lahaa Sepp Blatter.
Van Praag ayaa ku adkaystay in sawirkii FIFA ee uu mugdi sii gallayay tan iyo maalintii uu kursiga madaxweynaha ururka ku fadhiistay Blatter , loona baahi qabo inuu shaqada isaga tago oo u baneeyo cid kale oo soo celisa sumcadii ururka kubada cagta aduunka.
“Haddii aad 16 sanno ku fadhiday , bal adiguba isweydiiyoo maxaa kuugu hadhay,” ayuu gudoomiyaha xidhiidhka Holland ku yidhi waraysi uu siiyey waregyska Volkskrant oo ka soo baxa wadanka Holland.
“Sawirkii Fifa laga haystay hoos uunbuu u sii socdaa sumcadiisu sanadahan u dambeeyey. Dadka qaar baaba leh wuu burburay. Waxba kuma fila inaad iska sii fadhido. Blatter ayaana dhab ahaan ah qofka ka masuulka ah arintaasi.
“Anigu shaqsi ahaan waan jeclahay isaga. Laakiin shaqada ayay ka mid tahay in la is dhalliilo oo la isku eedeeyo wixii xumaada markaad adigu gudoomiyihii tahay. Marka xaal halkaas marayana. Waa inaad qaadaa talaabada masuuliyadaadu ku farayso.
“Waxaan rajaynayaa in Uefa maanta (Shallay) soo saari doonto war murtiyeed ay kaga hadlayso isa soo sharaxidiisa markale uu isa soo taagayo.”
Gudoomiyaha xidhiidhka kubada cagta aduunka ee FIFA, Sepp Blatter oo jagadan kala wareegay bishii June ee sanadkii 1998 kii , gudoomiyihii hore ee xidhiidhka mudane Joao Havelange, ayaa dhawaan daboolka ka qaaday inuu markii shanaad u sharaxan yahay jagadan , doorashada 2015 ka.
Odaygan 78 jirka ah, ayaa la kulmayay dhaliilo xoog leh mudooyinkii u dambeeyey , kuwaas ku eedaynayay wax is daba marin iyo musuq baahsan oo Fifa samayso, waxaanay arintani cirka ku laalantay markii uu soo baxay warka sheegaya in Laaluush ay bixisay dowlada Qadar loogu abaal mariyey marti gallinta koobka aduunka ee sanadka 2022 ka.
Ryan Taylor oo 32 bilood kadib Kulankii 1 aad ee Priemier League ah Dhaawac Looga Saaray
Costa Rica 1-1 Greece (Rig 5-4): Xulka Reer Latin America Oo Taariikha K-Aduunka Markii 1 aad 8-da Gaadhay